Wasiiro,Saraakiil Ciidan Iyo Ciidamo Imaaraadka Ka Socda Oo Saaka Berbera La Filaayo Inay Kasoo Degaan.
Tuesday March 28, 2017 - 10:00:18 in Wararka by Halgan News
Hargeysa(Halgan)Waxa saaka la filayaa inay magaalada Berbera soo gaadhaan wafti balaadhan oo ka socda dawlada Imaaraadka Carabta,waxaana halkaas ku sugaaya madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Waxaa waftigan hogaaminaaya wasiirka Isgaadhsiinta dawlada Imaaraadka Carabta Sa’if Mohamed Al Suwaidi , waxana la socda saraakiil ka tirsan ciidamada wadanka Imaaraadka Carabta.
Waftigan ayaa indho indhayn ku samayn doona goobaha loo qoondeeyey inay degaan saldhigna ka dhistaan ciidamada dawlada Imaaradka ee iman doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.
Waxa kale oo ay eegi doonaan dekeda magaalada Berbera oo ay iyadana dhowaan la wareegtay shirkadda Dp World , iyaga oo marka dambena kazoo dhoofi doona magaalada Berbera .
Waftigan iyo waftiga madaxweyne Siilaanyo ee ku sugan magaalada Berbera ayaa la filayaa inay isu soo raacaan dhinaca caasimada Hargeysa , iyaga oo kulano uga bilaabmi doonaan madaxtooyada Somaliland markay soo gaadhaan magaalada Hargeysa.